Oduu Bariisaa – Ethipian Press Agency
Finfinnee: Finfinneen magaalaa lammiileen jireenya hiyyummaan gadii baay’inaan keessa jiraataniidha. Kana furuuf jechas mootummaan federaalaas ta’e kan bulchiinsa magaalattii sagantaa misoomaa garagaraa qopheessuun hojiitti hiikaa jira. Keessumaa sagantaan seeftineetii misooma magaalaa waggoottan...	Read more »
Seenaa Itoophiyaa keessatti yeroo jalqabaatiif hogganaan waraanaa gonfoo kabajaa “Fiild Maarshaal” jedhamu kan argatan Generaala duraanii Biraanuu Juulaa yoo ta’an, kabajni kun gulantaa olaanaa geggeessaa waraaaaitiif kan kennamu yoo ta’u, akka addunyaatti...	Read more »
“Vaayirasiin ‘HIV’n/ ammayyuu nama qabaafi ajjeesaa jira” – Sistar Tigisti Tafarii
Adaamaa: Waa’een vaayirasii ‘HIV/AIDs’ sababa dubbatamuu dhiiseef waan hinjirre fakkaatus ammayyuu nama baay’ee qabaafi ajjeesaa akka jiru Biiroon Fayyaa Oromiyaa (BFO) ibse. Hoggantuu Ittaantuun biirichaa Sistar Tigisti Tafarii waltajjii leenjii “U=U concept...	Read more »
Fayyadamtoota IFH abbootii warraa miliyoona 9.4n ga’uuf hojjetamaa jira
Finfinnee: Inshuraansiin Fayyaa Hawaasaa (IFH) baasii waggaatti al tokko kanfalamuun tajaajila wal’aansaa waggaa guutuu argachuudha. Tajaajilli kun akka addunyaatti waraana addunyaa lammaffaan booda akka eegalame kan himamu ta’us, Itoophiyaatti erga eegalamee waggoota...	Read more »
“Itoophiyaa marii biyyaalessaa hunda hirmaachiseen ijaaramte barbaanna” – Jiraattota Magaalaa Amboo
Itoophiyaa namni akka ta’uufitti ijaare osoo hintaane biyya marii biyyaalessaa hunda hirmaachiseen ijaaramte barbaanna jedhan jiraattonni Magaalaa Amboo, Dhibbaalaa Sobbooqsaa Hordofaafi Obbo Kaasaa Ukaa. Keessumaa ummanni Oromoo tokkummaasaa cimsachuu keessatti gaheen hidhamtoota...	Read more »
Aanaa Noonnootti miseensonni shanee 24 harka kennatan
Amboo: Godina Shawaa Lixaa, aanaa Noonnootti miseensonni Shanee 24 mootummaaf harka kennachuu ittaanaan bulchaa aanichaa ibsan. Obbo Eliyaas Oljiraa yaada tibbana Dhaabbata Pireesii Itoophiyaaf kennaniin aanichatti yeroo dhihoodhaa as garichi bal’inaan socho’uun...	Read more »
Baankichi dinagdee waraanaan miidhame bayyanachisuuf hojjetaa jira
Finfinnee: Baankiin Hojii Gamtaa Oromiyaa diinagdee biyyattii waraanaan miidhame bayyanachiisuuf hojjetaa akka jiru Daareektarri maaykiroo xixxiiqaafi gidduugaleessa baankichaa Obbo Abdii Faqqadaa ibsan. Daarektarichi ibsa dheengadda Gaazexaa Bariisaatiif kennaniin akka jedhanitti, baankichi jalqabumarraa...	Read more »
“Otoo dhuguma Oromoof qabsaa’anii maaliif haadha hiyyeessaa dararu” – Aadde Taattuu Dabalaa
Shaambuu: Godina Horroo Guduruu Wallaggaa, Aanaa Guduruutti, namoonni qulqulluun fo’amanii garee shororkeessaa Shaneetiin akka ajjeefaman, qe’eefi qabeenyasaaniirraa akka buqqa’an akkasumas dararri hedduun irra gahuu gareen gaazexeessitoota Dhaabbata Pireesii Itoophiyaa daaw’annaa taasiseen taajjabeera....	Read more »
“Tarkaanfiin fudhatame kutannoo mootummaan marii biyyaalessaa hunda hammataa gochuuf qabu akeeka” – Paartiilee morkattootaa
Finfinnee: Tokkummaa biyyaa cimsuufis ta’e nageenya waaraa biyyattiiti mirkaneessuuf marii biyyaalessaa hunda hammataa gaggeessuun waliigaltee dhugaatiif murteessaa ta’uu paartiileen morkattootaa ibsan. Miseensa koree hojii raawwachiistuu fi Ittigaafatamaan Waajira Paartii Kongiransii Federaalistii Oromoo...	Read more »
“Mariin biyyaalessaa duudhaa Sirna Gadaatiin adeemsifamuu qaba” -Doktar Roobaa Pheexiroos
Finfinnee: Mariin biyyaalessaa Itoophiyaatti adeemsifamuuf jedhu biyyattiin bor siyaasa sirriin akka hogganamtu taasisuuf waan gargaaruuf akkaataa duudhaa Sirna Gadaatiin ta’uu qaba. Sirna Gadaa keessatti dhimmi kamuu mariidhaan xumurama. Sirnichi mariifi dhugaarratti bu’uureffata....	Read more »